नौमती बाजाः जीतको पर्याय | eAdarsha.com
पोखरा । पोखरा पृथ्वीचोकमा रहेको इन्द्रेणी नौमती मगर बाजा समूह आइतबार दिनभर व्यस्त रहे । टिमका १४ जनालाई बाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ थियो । एकै दिनमा उनीहरुले २ वटा पार्टीको जीतमा नौमती घन्काए । बिहानै वडा नम्बर १० को खुसीयालीमा नचाएका उनीहरुले दिउँसो १६ नम्बर वडाको जीतमा पनि नचाइरहेका थिए ।
पोखरा महानगरको गणना भइरहेको स्थान सहिदचोकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नौमती र बञ्चेबाजा घन्किरहेको हुन्छ । आइतबार मात्र पोखराको १०, १६, २९ र ३० नम्बर वडाको टुंगो लाग्यो । सबैले जीतको खुसीमा बाजा समूह डाकेका थिए । गएको ७ दिनदेखि पोखराको सहिदचोकमा बाजा बज्न छाडेको छैन । एक अर्थमा पछिल्ला समय जीतको पर्याय नै पञ्चेबाजा भएको छ । यसै कारण पनि पोखरामा रहेका बाजा समूहलाई खुसीयाली मनाइदिन भ्याइनभ्याइ छ ।
पोखराको वडा जित्ने बित्तिकै एउटा न एउटा बाजा समूह सहिदचोकको चौतारोमा पुगिहाल्छन् । उनीहरुको सहनाई, ढोलक, दमाहा, सानो दमाहा, बाउँताल, ट्याम्को, झ्याली, नरसिंहा र कर्नालको तालमा नेता कार्यकर्ताहरु कम्मर मर्काउन सुरु गरिहाल्छन् । जसले गर्दा जितेपछि नौमती अथवा पञ्चेबाजा अनिवार्य जस्तै भएको छ । सहिदचोकमै बुधबार वडा २४ को अध्यक्ष विजयी घोषणा ढिलाइ भएपछि वडा नम्बर १३ नाचिरहेका थिए । यसले पनि जीतमा बाजाको अपरिहार्यता महसुस गराएको थियो ।
हामी कुनै पार्टीको मान्छे हैनम् हामीलाई यो बेला कमाउनु जहान बच्चा पाल्नुछ
जेठ महिनामा लगनको महिना नभएका कारण पनि नौमती बाजा समूहलाई पनि आयस्रोतको राम्रो बाटो बनेको छ, निर्वाचन नतिजा । बाजा समूहलाई कसले जित्योसँग कुनै मतलब छैन । जुन पार्टीले बोलायो उही पाटीकोमा जाने बजाउने, नचाउने कमाउने उनीहरुको दैनिकी बनेको छ । इन्द्रेणी नौमती मगर बाजा समूहकै सदस्य हिमाल गर्बुजाले आफूहरु कुनै पार्टीको नभएको बताए । ‘हामी कुनै पार्टीको होइन्, जसले बोलाउँछ उसैकोमा जाने हो,’ उनले भने, ‘आज मात्रै बिहान वडा नम्बर १० र अहिले १६ नम्बर वडाकोमा बजाइरहेका छौं । अब एमालेले बोलाए पनि जाने हो ।’ विवाहको लगन नभएका कारण पनि आफूहरुलाई फाइदा भएको उनले सुनाए । ‘यो पनि एउटा सिजन नै हो ५ वर्षमा एकपटक चुनाव आउँछ, त्यसपछि कसले जित्ने? कसकोमा बजाउने?,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि सिजन आएको छ, बिहेमा जस्तो दुख पनि पाइँदैन ।’
विजयी र्‍यालीमा बाजा बजाउँदा बिहेमा जस्तो दुख नपाइने र पैसा पनि केही धेरै कमाइने इन्द्रेणी नौमती मगर बाजा समूहकै सदस्य रामचन्द्र थापाले बताए । ‘बिहेमा त बिहानै ५ बजे नै उठेर हिँड्नुपर्छ खाने ठेगान पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘बेलुका फर्कने बेला पनि रातै पर्छ कहाँ ? बस्ने के मा जाने हुन्छ यहाँ त त्यस्तो चिन्ता हुन्दैन ।’ यो समयमा कमाइ पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो । समूहले एक दिनमा २५ हजार लिने गरेकोमा अहिले एउटा समूहले नै २५ हजार दिने गरेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो रेट त एक दिनको २५ हजार हो, अहिले एउटा समूहबाट २५ हजारमै केही मिलाएर लिइन्छ,’ उनले भने, ‘एकै दिनमा २/३ समूहमा जाने भएकाले कमाइ राम्रै हुन्छ ।’
आफूहरुलाई कमाइसँग सरोकार भएकाले पार्टीको कुनै मतलब नभएको उनले सुनाए । ‘हामी कुनै पार्टीको मान्छे हैनम् हामीलाई यो बेला कमाउनु जहान बच्चा पाल्नुछ,’ उनले भने, ‘आज कांग्रेसकोमा आइयो, भोलि एमालेले र पर्सि अर्को पार्टीले बोलायो भने पनि जाने हो ।’ उनीहरुले एक दिनमा कमाइ भएको रकम १/२ हजार बाजा मर्मतका लागि राखेर अरु दामासाही रुपमा बाँड्ने गर्छन् । उनीहरुको समूहमा १८ जना सदस्य छन् जसमा ७ जना महिला छन् ।
इन्द्रेणी नौमती मगर बाजा समूह जस्तै पोखरा महानगरमा भएका अन्य नौमती तथा पञ्चेबाजा समूहहरुको आर्यस्रोतको गतिलो स्रोत बनेको छ, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ । बाजा घन्काएरै परिवारको घरखर्ची टार्न सहज भएको उनीहरु बताउँछन् ।